Accueil > Gazetin'ny nosy > Mpiasa malagasy : lavitry ny asa mendrika
Mpiasa malagasy : lavitry ny asa mendrika
Nomarihina ny alakamisy faha-7 oktobra teo ny “Andro Maneran-tany ho an’ny “Asa Mendrika”. Ny antsoina hoe “Asa mendrika” dia asa mamokatra ho tombontsoan’ny daholobe ary mahavelona an’ilay mpiasa. Ilay asa koa dia manaja ny zo fototra maha-olona, ny zo maha-mpiasa, ao anatin’ny tontolon’ny asa mandala ny fifampidinihana, ary tsy mikatsaka afa-tsy ny soa iombonana.
Amin’ny maha-fanamarihana an’ilay “Andro” dia natao fa ny fiatrehana ny fampivainganana azy koa dia mbola lavidavitra. Nahoana? Ny tontolon’ny asa dia ao anatin’ny tontolom-piaraha-monina ankapobeny eto Madagasijkara, ary toa izany koa any amin’ireo firenena hafa rehetra. Ny dikan’izany, tsy afaka ny haningana amin’ireo singa rehetra mamaritra ny fiaraha-monina Malagasy amin’ny ankapobeny ny tontolon’ny asa. Na izany na tsy izany, raha tsy miara-manomboka mitady ny vahaolana hanatsarana sy hanarenana izany ny firenena malagasy dia tsy hivoatra mihitsy.
Raha ny “asa mendrika” voalaza ery aloha no ifotorana dia tena mbola lavitry ny afo tokoa ny kitay satria ny herin’ny vola no mibaiko ary mafy koa ny gejan’ny fahantrana, ankoatry ny akon’ny tsy fahatsapan’ny mpiasa Malagasy ny lanjan’ny rafitra sendikaly. Ny kolikoly koa tsy mitysahatra. Ny sendika rahateo, toy ny zavatra maro eto, dia isan’ny marefo, ary izany dia taratry ny fiaraha-monina ankapobeny eto. Raha vao miresaka hoe “tolona sendikaly” dia tsy ny lafiny tsara amin’ny maha-fanoitran’ny fametrahana lamina ara-tsosialy azy no mby an-tsain’ny maro fa ny lafiny ratsy izay matetika tsy nisy, dia ny fiheverana fa “misy ambadika politika”. Ny mpampiasa rahateo, ary tafiditra ao anatin’izany matetika ny mpitondra fanjakana, dia miezaka manao izay tsy hisian’ny rafitra toy ny sendika, fa manelingelina an-dry zareo. Ny Sendika anefa no sehatra hahafahan’ny mpiasa mamondrona ny heriny ho fanoitran’ny fanatsarana ny tontolon’ny asa.
Tsy tokony afangaro mantsy ny ezaka hanatsarana sy hanarenana ny tontolon’ny asa sy ny hoe “tolona sendikaly” mitaky sy manohitra ny mpampiasa. Efa ny toe-tsaina mandala fifampidinihana eo amin’ny mpiara-miombona antoka ara-tsosialy (fanjakana sy mpampiasa ary mpiasa) no nohamaivanin’ny olona sasany, nefa io dia sehatra goavana ahafahana miantoka ny fanatsarana ny tontolon’ny asa ka tafiditra ao anatin’izany ny hampanjary ny antsoina hoe “asa mendrika”